Ngo-1994, i-automaker German Audi kwethulwa yayo entsha a8 Audi D2 / 4D. Leyo mikhumbi okuqala ayengelona phambili drive sedan uhlelo. Ngemva konyaka, yaqala ukukhiqiza ezine-wheel drive enomzimba insimbi engagqwali futhi engasindi aluminium ingxubevange. Ekuqaleni, imoto ibe injini V8 futhi V6 ne imiqulu 3.7 futhi 2.8 amalitha, ngokulandelana. Kamuva ngokuhamba kuhlanganisa 150 tisilnye diesel ivolumu 2500 "cubes", ifakwe Turbocharger uhlelo. Okulandelayo phezu izimoto asungule ngisho namandla kakhulu eziyisithupha cylinder esebenzisa u-petrol izinjini, ogama umthamo sifinyelela 300 hp
Ngemva kweminyaka emihlanu, kusukela ngo-1998, i-Audi A8 kushintsha njalo ukubukeka. Lokhu kungenxa yokuthi inkampani ufuna uthole isitayela esisha ngenxa yabo "premium izimoto." On onobuhle nhlobonhlobo umzimba, izibani ngisho Izinsimbi kurediyetha. Into kuphela inkampani engafuni ukuphonsa ithawula, kungcono kusuka ingxubevange eyingqayizivele zazo ayenziwa emizimbeni imoto.
2002 imakwe ukukhululwa kwe umugqa entsha A8 futhi osungulwe nomqondo ukuqhubeka. Leyo mikhumbi ezintsha ifakwe Ukukhetha ocebile okukhethwa kukho okuseqophelweni, okuyinto, ngokuhlanganiswa nokwethenjelwa, induduzo ukubukwa okukhethekile yokwenza lezi ekilasini izimoto esiphezulu othandeakayo abathengi abaningi. Isici esikhethekile wayebuye yokuthi entsha 3.7 futhi 4.2-litre V8 injini kuhlangene six-speed gearshift tiptronic.
Inhlanganisela engasindi aluminium umzimba, gearbox omusha futhi, yebo, injini esinamandla, wanikeza ukusheshisa eqinile imoto ngokuphelele usayizi ze-non-ezincane.
Manje ukukhathalela Audi esethula entsha Audi A8 2012 ukukhululwa emakethe.
Kusukela kulo mshini onjiniyela udale i handsome. Akukhona ukubukeka komzimba akuyona kuphela. I ashukumisayo Ingaphandle ingaphakathi Audi a8 2012 imishini zemidlalo umnyuziki ibhekiswe umshayeli futhi kumenza acabange ukuthi ungaphakathi isikebhe yangaphandle. Salon ukuze screw zokugcina futhi ergonomically phelelisa ngaphansi esiqinile isitayela esithile.
Imoto ifakwe okufanayo ezine-wheel drive Quattro. Le mpumelelo onjiniyela Audi sika iminyaka eminingi akabazi izimbangi ekilasini yayo. Audi A8 ngo-2012, intengo zazo, kuncike kuhlomisa ka amabanga kusuka 4 kuya ku-6 kanye ruble eziyisigidi nesigamu, kubhekwa ehlukile ukushayela yayo amakhono. Kulawa, Ngithanda ukusho ukumiswa emoyeni eyenziwe dyuralalyuminievogo ingxubevange, okuyinto ngakho "smart", okuyinto uqobo ukhetha imodi elikhulu ezihlukahlukene evele endleleni. Lolu khetho kusukela Audi okukhethekile.
I 2012 Audi A8 emelela isofthiwe eziphambili kakhulu futhi izixazululo zobuchwepheshe etholakalayo namuhla evumela ukuba umshayeli ukukhohlwa mayelana nazo zonke izinto kancane futhi ukuba agxilise ngokugcwele ukushayela, ukuthola kusukela le njabulo esiphezulu.
Ngaphansi hood lokhu kusendlini V8 ezimbili ezinkulu, enikeza out 335 hp amandla ahlanzekile, onekhono ukuhlakaza imoto 250 km / h. Ngokwemvelo, ijubane obuyisilinganiselo ngekhompyutha elinganiselwe. Dynamics ukuhlakaza amakhulu 6.3 imizuzwana. Ngaphezu ukumiswa, Audi A8 e 2012 ifakwe isistimu unyathela amabhuleki kanye uhlelo oluyimpumelelo isondo othomathikhi uhlelo lokuqapha ingcindezi. Isandla esiqine ngokweqile komzimba entsha liye landa ngamaphesenti angu-60% uma kuqhathaniswa no-esasisandulele. ukuphepha engeziwe inikezwa yi abagibeli kakhudlwana futhi airbag ezengeziwe, ziye eziklanyelwe ukuvikela ikhanda nentamo. Ukuphepha kwe-moto eyayihambisana uhlelo «okukodwa inkumbulo», okuyinto "kukhumbula" umnikazi wako ekhona e esihlalweni somshayeli.
Mayelana 'MegaFon "ukufihla inamba. Indlela Ukushayela inombolo kufihlwe ( "megaphone")